Heegan oo wacdaro ku dhigtay Dekedda +Sawirro
0 in Xiriirka Kubadda Kolayga by Nocsom Editor
(Kubadbile)- Kooxaha kubada Koleyga Heegan iyo Dekedda ayaa ku kulmay garoonka Wiish kulanki 21 ee wareegga hore horyaalka kubadda Koleyga 2015-16.
Kulanka oo labada kooxu ahaa kulanki shanaad ee horyaalka waxaa u soo daawasho tagay dadweynihii ugu badnaa horyaalka soo xaadira waxaana ka mid ah masuuliyiin , cayaartooy garsooriyo taageerayaasha labada koox.
Heegan oo horyaalka difaacanaysa iyo Dekedda oo baadigoob ug jirta in ay hanato horyaalka ayaa soo bandhigay cayaar wanaagsan oo ay ka maqsuudeen dadweynihi u soo daawasho tagay waxaaana loolanka xaga bandhiga uu dhex maray Siid Cali Kuukaay iyo Cabdirisaaq Mandella oo dekedda ah iyo Cali Baraawiini iyo Cabdifitax Buukaale oo dhanka Heegan waxaana qaybta hore lagu kala nastay 37 -30 ay hogaanka ku hayso kooxda Heegan.
Marki laysku soo laabtay Heegan ayaa 10 sedexaaddheeraysatay hogaanka cayaarta, , basle 10-ki ugu dambeeyay ayay aad isu dhawaayeen labada koox waxaana ugu dambayan ay cayaarta kusoo idlaatay 73-60oo ay Heegan dhigeeda kaga adkaatay 6 jeesto iyo Personal.
Faahfaahinta dheeri ah.
afarta qayb ee ciyaarta loo ciyaro oo ah min 10 daqiiqo qaabkan ayay labada koox u kal heleen dhibcaha
Heegan iyo Dekedda
1- 17 - 15
2- 20- 15
3- 16- 11
4- 20- 19
Badhiga gool dhalintaciyaarta waxaa loo kala dhaliyay sidatan.
1-Cabdifitaax Maxamed Macoow ( Buukaale ) No.8 Heegan, ayaa dhaliyay dhibicii ugu badnaa kulanka16 jeesto iyo Personal oo u dhiganta 33 dhibcood.
2- Waxaa kusoo xigay Cali Maxamed Aadan(Baraawiini) No 7 Heeganwaxuu dhaliyay 12 jeesto oo u dhigantya 24 dhibcood.
3- Siid Cali Axmed Kuukaay No 10Dekedda waxuu dhaliyay 11 jeesto oo u dhiganta 22 dhibcood
4-Cabdirisaaq Axmed Dable Mandella No, 11 Dekedda waxuu dhaliyay 9 jeesto iyo personal oo u dhiganta 19 dhibcood.
Kulanka waxaa garsoore ka ahaa Sakariye Macalin Nuur iyo Axmed Cabdullahi Faarax Baroodo.